भेनेजुएला वरिपरि मिडियाको झूटो प्रचार: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
भेनेजुएला को आसपास मीडिया को झूठ प्रचार
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	5 फेब्रुअरी 2019 मा	• 8 टिप्पणिहरु
त्यहाँ अझै पनि सबै जनजातिहरू एनओएस समाचारहरू हेर्छन् र त्यस समाचारको सत्यतालाई प्रश्न गर्दैनन्। यो प्रचार अधिक र अधिक कलेजगार्टन जस्तो स्तर बनिरहेको छ र तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ - प्यानक्चर गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। तथापि, मुख्य स्ट्रीममिडियाले यस तथ्यलाई गम्भीर बनाउँछ कि तिनीहरूको नकली समाचार र 'रूसी नकली समाचार कारखाना' अभियानले यो भरोसालाई पुनः प्राप्त गरेको छ।
इमानदार निष्पक्ष हो: अधिकांश मानिसहरूले कहिल्यै पनि समाचारमा प्रश्न गरेनन्। तपाईं बस साँझ बस्नु हुन्छ र त्यसपछि तपाई के संसारमा के गरिरहनु भएको छ। राम्रो छैन। त्यहाँ तपाइँले संसारमा के गर्दैछ भन्ने एक पूर्ण विकृत तस्वीर हेर्न पाउनु हुन्छ। एक तस्वीर जो राजनीतिक निर्णयहरू सामूहिक रूपमा र सजिलै जनतामा सामूहिक रूपमा सामूहिक रूपमा निश्चित हुन्छन्, त्यसैले सबैले निर्णयसँग सहमत हुन्छन्। निस्सन्देह हामी बायाँ र दाँया, हरी, उदारवादी र नियन्त्रित विरोधको स्वाद पनि छ, तर यो उच्च लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति राख्न छ। भेनेजुएला को विषय मा, त्यहाँ केहि संदेह छ: यो अमेरिका को निगरानी को तहत देशहरु को साम्राज्यवादी सूची मा अर्को देश हो।
तलको भिडियो यस्तो एक सरल साधन हो जुन जबरजस्ती तपाईं जान्छ। यो NOS युवा समाचारहरूको सम्झना हो; तपाईलाई ती बच्चाहरूको दिमागवाट प्रसारण थाहा छ जुन प्राथमिक विद्यालयहरूमा देखाइएको छ, त्यसैले बच्चाहरू संसारको प्रचारप्रसारिक छविसँग प्रोग्राम गरिएको छ। दिमागमा चाँडै सुरु हुन्छ। वास्तवमा, म साँच्चै यी चलचित्रहरू विश्लेषण गर्न आवश्यक अझै पनि छ कि छैन भनेर सोच्नुहोला, तर संभाव्यतः यस्तो bleating केक को एक टुक्रा रूपमा यसलाई प्राप्त निहित कि निर्माता स्पष्ट अनुभव छ किनभने, कि साँच्चै आवश्यक छ र तिनीहरूले कथा टाप थप छैन भनेर गहिरो हुनु (अझ बढ्दो भव्य संग)।
तल भिडियोमा फिट भएको एउटा मात्र चीज हो कि भेनेजुएला क्षेत्रको सबैभन्दा तेल-धनी क्षेत्र हो। देश को लागि अमेरिका को चकलेट देखि बाहिर रहन कोशिश गर्दै छन्। रॉयल डच शेल पीडीवीएसए (भेनेजुएला तेलको कम्पनी) बाट तेल निकासी लिनको लागी उत्सुक छ। त्यहाँ मैले 2017 मा लेखे यो लेख पनि त सेन्ट Maarten मा तूफान यो प्रक्रिया र शायद कसरी ठूलो भेनेजुएला को तेल रिजर्व को तूफान को झूटा बहाने डच नौसेना द्वारा "सुरक्षित गरे" के थियो भन्ने disclosed थियो जो बारेमा। यहाँ देख्नु नं चलचित्र देश मा एक स्वभाविक संकट मा भेनेजुएला मा संकट को लागि सबै दोष राख्नु, तर कारण व्याख्या छैन। निस्सन्देह, त्यो वर्ष वर्ष को लागि अलग गर्न को लागी झूठ को कारण छ। विगतमा, यो भयो जब एक शहर घेरिएको थियो र भोजनको वितरणको लागि सबै पहुँच सडक बन्द भयो। जनसंख्या भोक लगाउन सुरु हुँदा, तिनीहरू विद्रोह गर्न थाले र दुश्मनलाई आत्मसमर्पणको लागि कल गर्छन्। यो सिपाहीहरूको लागि उत्परिवर्तन शुरू गर्न पर्खिरहेको छ। इन्टरनेट र सोशल मिडियाको नयाँ समय पनि भित्रबाट अवरोध सुरु गर्न सजिलो बनाउँछ।
जुआन Guaidó, भेनेजुएला संसदको राष्ट्रपति, जो पनि उप राष्ट्रपति कलको रूपमा ईयू देशहरु द्वारा पहिचान गरिएको थियो, वास्तवमा पश्चिम को एक मोहरा हो। म्युरो यो लामो समयसम्म रहनेछ कि प्रश्नको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के सेनाले आफ्नो छेउमा छान्ने प्रयास गर्नेछ? रूस, टर्की र विशेष गरी चीनले के गर्नेछ? चीनले भेनेजुएला अर्थव्यवस्थामा अरबौंहरू लगानी गरेको छ र पश्चिमी अधिग्रहणको साथमा पैसा निस्केको छ। Zerohedge.com यी लगानीहरूको आकार दुई दिन अघि रिपोर्ट गरियो:
पछि लाग्ने ऋणमा बाह्र वर्ष र 50 डलर भन्दा बढी वेनेजुएलामा एक राजनीतिक संकट चीनको वेतन-आउट धम्की दिइरहेको छ र बेन्जिङ ड्राइभमा प्रोक्सी स्ट्यान्डअफमा ड्राइंग गर्दैछ किनभने यो अमेरिकामा अमेरिकी नेतालाई समर्थन गर्दछ। यो वाशिंगटनसँग विवाद हो जुन बेइजिङ बिना काम गर्न सक्दछ, चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको वजनमा व्यापार विवाद समाधान गर्ने प्रयासको क्रममा।
यो धेरै अधिक छ जब हामी भेनेजुएला को बारे मा चुनाव को बारे मा कुरा गर्छन कि लोकतांत्रिक छैन। यो सबै पैसा हो र चीन, रूस र टर्कीको विरुद्ध चीनको सबैभन्दा ठूलो हितधारकको रूपमा अमेरिका र यसको सहयोगीहरूले ब्लक ब्लक बारेमा। पश्चिमी एलायंसले शासन परिवर्तन गर्न सक्दछ जुन यो समयमा यूक्रेनको 2014 को रूपमा सजिलै संग यो सानो देखिन्छ। यदि माडुरोले चीन, रूस, टर्कीलाई सैन्य सहयोग प्राप्त गर्यो भने यो अर्को अयोग्य युद्ध हुन सक्छ। मेरो विचारमा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था लामो स्थितिमा छैन र tatters मा वास्तवमा पहिले नै नाटो गठबंधन छ (को सम्बन्ध, अर्थात् अमेरिकी र टर्की मा दुई सबै भन्दा ठूलो सेनाले बीच द्वन्द्व दिइएको) र समस्याहरू पनि तर युरोप देखा यसको शिशुमा हुनुहोस्। यदि ठूलो अमेरिकी साम्राज्य पराजित हुन्छ र नाटो गठबन्धन बिस्तृत हुन्छ भने, यसको अर्थ ट्राम्पको अन्त हो। यो अमेरिकी अमेरिकी साम्राज्यको योजना बनाएको छ, म एक मा छ अघिल्लो लेख पहिले नै वर्णन गरिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामी मीडियामा प्रचारमा धेरै नदेख्ने छैनौं र मदुरोले चाँडै पछाडिको आशा गर्न सक्दैनौं।
एक गृहयुद्ध अत्यावश्यक देखिन्छ। तपाईं 'नागरिक' शब्द 'पश्चिम द्वारा ईशारा गरिएको सैन्य हस्तक्षेप' को प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी शायद उदाहरणका लागि पश्चिमी mercenaries शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों (वा यस्तै केही) मा तेज भेनेजुएला सैनिकहरू गोली जाने लुगा जो युक्रेनको-जस्तो लक्षण हेर्नुहोस् जानेछ। त्यो प्रचारवादी छविले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सम्भव बनाउन जनताहरूलाई समझाउनु पर्छ। जनताले अहिले पनि गोप्य सेवा (सीआईएको रूपमा) को सहयोगमा मिडियाको प्रचार माध्यमबाट केहि पनि थाहा पाएको छैन। यो केही हप्ता भित्र समाधान छैन, तर सम्भवतः प्रारम्भिक अमेरिकी साम्राज्य संक्षिप्त सुनिश्चित गर्न त्यहाँ डलर को गिरावट रूपमा सम्भव सकारात्मक Maduro लागि नतिजा लामो-चलिरहेको द्वन्द्व हुनेछ।
जनसंख्या भूकम्प पछि अमेरिका को दिशा मा भेनेजुएला मा रेजिम परिवर्तन
जब एक प्रहरी राज्यले जनता विरुद्ध प्रतिबन्ध गर्दछ (भेनेजुएलाबाट तस्बिरहरू)
छुट्टिने योजना अरुबा, बोनायर, कुराको? संयुक्त राज्य अमेरिकाले हबको रूपमा एबीसी द्वीपका साथ सुरु भएको युद्धको लागि तैयार रहनुहोस्
ट्याग: गृहयुद्ध, विशेष, जुआन Guaido, Maduro, तेल, खोल, भेनेजुएला, चुनाव
5 फरवरी 2019 मा 16: 06
5 फरवरी 2019 मा 16: 12
कसलाई पहिले नै अमेरिकाको ऋण फेरि थियो? नाटो गठबन्धनमा पहिलो दरबार पहिले नै देखिने छ ...
वाल्लस बोल्टनले यो एक पल्ट बढी चिन्ता गर्छ ... 😀
5 फरवरी 2019 मा 19: 59
प्रत्येक देशमा सबै नेताहरू ठूलो एजेन्डा पछ्याउनेहरू हुन्। सँधै जस्तै भयो र यदि तपाईले सूट गर्नुहुन्छ भने, सबै चीजहरू फेरि फर्काइनेछ। सबै धर्मको ब्यानर अन्तर्गत, राजनीतिक प्राथमिकता वा मूल। सबै ठाउँमा हामी राम्रो कुराकानी बेच्न ब्लक देख्छौं। एक फरक तरिकामा समान कथाहरू, डराउँछन् र अर्को पक्षले तिनीहरूलाई के गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। यो सबै भगवान (सुन, तेल र ड्रग्स) जान्छ।
5 फरवरी 2019 मा 21: 11
यो हेर्नुहोस् कि मेरो टिप्पणी यो दिउँसो बाट तपाईं संग आएको छैन। कष्टप्रद टग सामान्य शंकास्पद बनें, मेरो भाषणको स्वतन्त्रता कहाँ छ?
म आजको सट्टा कलको बदलामा वास्तविक मानव अधिकार र सामान्य संदिग्ध व्यक्तिहरूको साथमा तपाईलाई प्रमुख स्थान दिनेछु र खानमा काम गर्दछु। नम्रताको लागि राम्रो गन्दा मान्छे।
6 फरवरी 2019 मा 02: 07
भेनेजुएलाका बारे थप समाचार:
12 फरवरी 2019 मा 17: 11
यसैले OTPOR पुस्तिका पुस्तिका बाट ....
चावजेको लोकप्रियताको साथ र यसको सरकारले व्यापक समाजवादी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै अक्टोबर 5, 2005 मा पाँच भेनेजुएला "विद्यार्थी नेताहरू" बिरुवाको लागि प्रशिक्षण सुरु गर्न बेलग्रेड, सर्बियामा आइपुगे।
विद्यार्थीहरू एप्लाइड गैर-हिंसात्मक एक्शन र रणनीतिका लागि केन्द्रका भेनेजुएला शिष्टाचारबाट आएका थिए, वा केवीएएस। यो समूह अधिकृत राष्ट्रीय बंदोधनका लागि डेमोक्रेसी को माध्यम ले वित्त पोषित भएको छ, एक सीआईए कट आउट आउट हो जसले राजतन्त्र को परिवर्तन को बढावा को अमेरिकी सरकार को मुख्य हात को रूप मा कार्य गर्दछ; र अफशूटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन इन्स्टीट्यूट र नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूट इन्भेस्टमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटफफबाट लीक गरिएको आन्तरिक इमेलहरूको मुल्यमा, एक खुफिया कम्पनी "छाया सीआईए" "क्यानाभ" भनिन्छ जसको रूपमा 1999 / 2000 विरोधी-मिलोसविक संघर्षको समयमा सीआईए कोष र प्रशिक्षण प्राप्त हुन सक्छ। "
कैनवास एक स्पिनफ वा ओट्र्स हो, बेल्जियम विश्वविद्यालयमा 1998 मा सर्डाजा पानोभिक द्वारा स्थापित सर्बिया विरोध समूह। ओटोर्प, जिसका अर्थ सर्बियामा "प्रतिरोध" हो, विद्यार्थी समूह थियो जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्धि पाएको थियो - र हलिवुड स्तर पदोन्नति - यसको प्रदर्शनले गतिलो पार्दै स्लोबोडन मिलोसोभिकलाई पराजित गर्यो।
शासनको यो सानो कक्ष विशेषज्ञ परिवर्तन भएकाले जेनेट शार्पको सिद्धान्तअनुसार जेनेरिक शर्पको सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेको थियो, जसलाई भनिन्छ "क्लौजिट्ज वा गैर-हिंसक संघर्ष।" तीव्रले पूर्व रक्षा खुफिया एजेन्सीको विश्लेषक, केन्यासँग काम गरेका थिए। एक रणनीतिक ब्लुप्रिन्ट को कल्पना गर्न को लागि रबर्ट हेल्वे, जो हाइब्रिड युद्ध को एक रूप को रूप मा हथियार को रूप मा विरोध गरेको छ, वाशिंगटन को एकताप्राय वर्चस्व।
12 फरवरी 2019 मा 17: 29
यसलाई हेर्नुहोस्! यो पहिले नै स्पष्ट थियो कि यो प्रयास र परीक्षण गरिएको विधि यसको पछि थियो, तर यो अझै स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरिएको छ।
"होइन, यो 2005 मानिसमा थियो" ओह र त्यसपछि ती अचानक बन्द भयो? होइन, अवश्य होइन। मधुरो चाउजको पादरी हो ... जसले छोड्नु पर्छ।
15 फरवरी 2019 मा 18: 28
शासन परिवर्तनको लागि जिम्मेदार व्यक्ति अब्राम, एक 1e वर्ग (दोषी) युद्ध आपराधिक ग्वाटेमाला / एल साल्भाडोर (ईरान-कंरारा)
« हामीसँग एउटा अर्को छ: एक डचम्यानले इस्लामलाई परिवर्तन गरे, पीवीवी राजनीतिज्ञ (एआईवीडी-एआर) जोर वान क्लेभरन
बेल्जियमका प्रधानमन्त्री जेक स्भलियरिजले गोप्य सेवाको विरोध गर्ने तयारीको बारेमा स्वीकृतिपछि इस्तीफा दिए »
कुल भ्रमण: 10.747.915
1.609 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्